Maro ireo manampahaizana amin’ny lafiny ara-bola sy ara-toekarena no efa feno fanahiana amin’ny zava-mitranga. Ankoatra ny ady ara-barotra misy amin’ny Etazonia sy Sina mantsy dia efa miroso amin’ny krizy saro-bahana hatrany ny firenena Alemana sy Anglisy ary ny Eoropeanina. Hatreto aloha dia hita miavaka mahazo vahana ara-toekarena hatrany i Sina na dia eo aza ny ady mangotraka ataon’ny firenena amerikanina aminy amin’ny sehatra ara-barotra. Etsy an-daniny, ireo firenena manana solika ihany koa no mbola hita ho manana ambim-bava fa ny ankoatr’izay dia mivoaka sempotra avokoa. Raha ny eto Madagasikara indray no asian-teny dia mahavelom-panantenana aloha raha ny tatitry ny boky be ho fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana nataon’ny praiminisitra tamin’ny faran’ny herinandro teo. Sarotra ihany anefa ny fandidiana satria na ireo mpandraharaha mpampiasa vola aza amin’izao dia hita ho tsy marisika ary miandriandry sy mandrimandry manan’aretina. Tsy voavaha mihitsy izao hatreto ny olan’ny fahatapahan-jiro izay mampikaikaika ary tena lavareny tsy manam-pahataperana tato ho ato. Efa mampihemotra sahady ireo mpandraharaha te hampiasa vola ny toe-java-misy. Manjohy ny firenena mampihen-danja ny toekarena maneran-tany ihany koa i Madagasikara noho izany. Mampanahy ny tranga ara-toekarena iraisam-pirenena misy satria ny krizy 2007-2008 niseho tany Amerika ihany no nampiadam-pandeha ny toekarena maneran-tany tamin’ny fotoan’androny. Amin’izao fotoana izao dia mifangaro voraka satria ankoatra ny ady ara-barotra misy amin’i Etazonia sy Sina dia miharihary ny olana geopolitika misy any Moyen Orient, ny fitotongan’ny toekarena alemana sy Anglisy izay miteraka fahasahiranana ho an’i Eoropa manontolo.